Waxyaabaha keeni kara in khasaaro xog ku saabsan kaadhka xusuusta ah
Marka ay timaado in taxay arrimaha sabab u ah lumista xogta dhacdaa markaa waxaa aad u adag in la hubiyo in dhammaan iyaga ka mid ah waxay ku qoran yihiin oo dhan waxaa sabab u ah iyagoo tiro badan oo. Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in sababaha khasaaro xogta marka hore la falanqeeyay hor tallaabo kasta waa in la qaado arrintan la xiriira sidii ay u samayn lahaayeen jiho hab. Si loo hubiyo in arrinta la xalin u user waxa uu ku taliyay in la hubiyo in ikhtiyaarka ugu fiican waxaa la doortay si ay u soo kabashada marna waa ciyaar oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijyada software la heli karo ee suuqa ee waa in la hubiyaa ku salaysan user rogaal celinayo si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Ka dib waxaa lagu Si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah waxyaabaha sababi gaartay xogta:
1. arrimaha kaarka Memory
Card Memory ama wax qalab lagu kaydiyo oo la xiriira waxaa dhif tijaabiyo shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu badan ee khasaaraha xogta. Kaarka helo musuqmaasuqa iyo xogta ka dibna waa aan la heli karo. Users waxaa lagula talinayaa in ay helaan dhamaadka sare iyo kaararka xusuusta tayada wanaagsan ee arrintan la xiriira in arrinta la xalin. Kaararka Kuwani waa kuwa la tijaabiyaa iyo talo ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira waa SanDisk ah in la og yahay samaynta kaararka xusuusta cabsi badan.
2. isticmaalka oggalaansho
Nolosha kaararka xusuusta waa mid aad u xadidan oo uguna oo waxaa la arkay in inta badan loo hubiyo in la sii wado oo isticmaalaya kaarka xitaa ka dib markii taako nolosha la dhamaystiro. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in kaadhka buuxda loo tuuraa dhawr sannadood oo ah isticmaalka ka dib. Waxaa haysan maayo oo kaliya xogta ammaan ah, laakiin sidoo kale xaqiijin doona in kaararka waxaa lagu bedelay si joogto ah si looga fogaado in arrinta gebi ahaanba.
Sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha ugu xumaa oo keeni in arrintan. User waa keliya mas'uul ka ah arrinta iyo khasaaraha xogta sababtay. In habkan kaarka laga saaro akhristaha markii waxyaabaha ku furan yihiin kombiyuutarka ama qalab kale oo wax. Same waxaa loo sameeyaa marka xogta kaar ayaa loo wareejiyey. Sidaa darteed waa arin uu keeno sabab u tahay qalad ah aadanaha iyo sabab la mid ah waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in kaarka loo isticmaalo daryeelka iyo dadaal inaad ka fogaato arimahan buuxda.
4. arrimaha Dhignaashada
Waxaa lagula talinayaa in ay qaab kaadhka xusuusta gudahood qalab oo ay u la soo iibsaday oo la isticmaalo. Haddii kaarka formatted isticmaalaya computer ka dibna kala iibsiga xogta ku xiga oo ka kaarka noqon doonaa mid gaabis ah oo mararka qaarkood kaarka sidoo kale uu noqonayaa leheyn. Sidaas daraaddeed user waa in la hubiyo in farsamooyinka ugu wanaagsan waxaa codsatay in arrintan la xiriira si loo hubiyo in arrinta waafaqsan marnaba dhacdaa sameeyo.
Xogta dhaco tirtiray
Mararka xogta la kac ahayn tirtiray oo user helo dhibaato. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay helaan ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka software xusuusta farshaxanka kabashada card ma aha oo kaliya ay daboolayaan baahiyaha user, laakiin sidoo kale hubiyaan in natiijada ugu wanaagsan waxa la siiyaa marka ay timaado soo kabashada. Qaybta dambe ee tutorial this hubin doona in barnaamijka software sida keliya ma aha mid la soo bandhigo, laakiin habka la xiriira ayaa sidoo kale sharaxay in buuxa si aan marnaba helo user arrimaha. The geedi socodka in lagu soo sheegnay lahaa ayaa sidoo kale waxaa la socda ay Screenshot khusayso oo halkan geeddi-socodka looga dhigi doonaa tan iyo ka hawl yar user.
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in ay jiraan tobanaan kun oo barnaamijyo software in la heli karaa online si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Si kastaba ha ahaatee ugu fiican ayaa kaliya heshay fiican sida Wondershare ayaa bilowday wax soo saarka kale oo xiiso leh sida magacaabay Wondershare Data Recovery . Barnaamijkan ayaa waxaa si gaar ah loo sameeyey si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti lahayn dhamaan gudaha iyo sidoo kale waxaa uu u suuragelinayaa isticmaala inuusan si aad u hesho files ka soo kabsaday. Waxaa jira laba hab hababka barnaamijka ie Wizard iyo hab Standard taas oo ka dhigaysa barnaamijka si siman u isticmaali karo oo dhan isticmaala oo sidaas daraaddeed buu u heer sare ah ayaa lagu talinayaa. Laga soo bilaabo Shil khasaare xogta computer ay sabab u tahay hardware failure Wondershare Data Recovery ayaa helay oo dhan daboolan oo ka soo dhacsaday iyo barnaamijka ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan si aad u samaysay shaqada.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta la Wondershare Data Recovery
Faahfaahinta hanaanka lagu xusay hoos ku qoran iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in ugu wanaagsan waxaa laga soo adigoo raacaya talaabooyinka saxda ah ku xusan:
1. Laga soo bilaabo http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi, rakibay oo bilaabay si interface soo socda u muuqataa,
2. Marka button xiga waxa ay ku sii adkeeyey user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in nooca file waxaa loo doortay in ay sii wadi:
3. Meesha khasaaraha file sidoo kale waa in la cayimay si ay u helaan software ka shaqeeya habka ugu fiican:
4. kabsaday files yihiin markaas in loo arko in la hubiyo in user ka yeerto oo kaliya ama ay hubinaysaa kuwa ay tahay in la soo kabsaday ka dibna ku dhuftay badhanka bogsanaysaa;
Noocyada macluumaadka ay taageerayaan barnaamijka
Ka dib waa xogta ama nooc file taasoo ay taageereyso barnaamijka software Wondershare Data Recovery ah:
Sababaha software aan sanaanayaa xogta laga kaadhka xusuusta
Marka ay timaado in barnaamijyada software-kabashada xogta ka dibna waxaa jira khataro gaar ah in la xiriira iyaga iyo sababo la xiriira taas oo ay mararka qaarkood ma awoodaan in ay dib u soo ceshano xogta. Sababaha caadiga ah waa sida soo socota:
1. dhaawac ba'an jirka qalab kaydinta
2. Virus ama furin caqabad ku shaqeynta barnaamijka
3. qalab ayaa waxaa si aan isticmaalo sida lagu faray
4. Xogta la xiriirta in aanu jirin ee la qalab ama kaydinta baadhay.
5. barnaamijka xogta ayaa lagu rakibay qalabka dhaawacan ama bartilmaameed oo uu overwritten xogta la doonayo gabi ahaanba.
Waa maxay nooca xogta ha aad rabto in aad dib u soo ceshano?
Badanaa dadka isticmaala ee waajibka ku ah inay dib u soo ceshano macluumaadka la xiriira si shakhsi ugu isticmaalaan oo ka mid ah videos, sawiro iyo cajalado maqal ah oo halkan xogta shakhsi hogaaminaya liiska iyo codbixintan.
> Resource > Memory Card > xal Best inuu ka soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta